Germany na nkuzi Titanic: na-ezighi ezi ma na-ezighi ezi
Okwu nye webusaiti
Ndị Nazi ime uche
Ọdịda nke ọgbọ
Na-agbazi mgbe niile ma na-ezighi ezi mgbe niile
Kedu onye meriri na ntuliaka ahụ?
Ihe ndị a dị oke mkpa jikọrọ ọnụ bụ nrapado, ọkaibe na enweghị ụkpụrụ. Ọ dịghị otu onye n'ime ha nwara imebi iwu Merkel n'otu oge.
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge izu 3 Oge izu 3
Ara ịgba ọgwụ mgbochi na -ejide ụmụaka
Atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke gọọmentị na-agbaso maka ụmụaka na ndị ntorobịa na ịhụ nne na nna n'anya bụ akụkụ nke mbọ aka ekpe na-agbaze ezinụlọ na ọrụ na ọrụ mbụ ya na ilekọta ụmụaka n'aka nne na nna (alụmdi na nwunye maka ihe niile / mmemme nwoke / amụma pere mpe).
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge ọnwa 2 Oge ọnwa 2
Nye ndị a na -enyeghị ọgwụ mgbochi
Atụla egwu. Ị na -egosi nkwụsi ike, ịkwụwa aka ọtọ na mkpebi siri ike. Ị ga -ezukọ n'ime obodo gị, mee atụmatụ inyere ibe gị aka, ma kwado ịza ajụjụ sayensị na nnwere onwe ikwu okwu nke dị mkpa maka ọha mmadụ ito eto.
Ndụ kwa ụbọchị na -eweta ya: ndị ọchịchị nwere ndị ọrụ afọ ofufo. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga -abụ ndị uwe ojii na -eme ihe ike. A na -akpọbu ya Blockwart!
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge ọnwa 3 Oge ọnwa 2
Anyị abụghị ndị AfD, mana n'ezie anyị nọ ya nso na nkwenye siri ike. Ma dịka ndị na-abụghị ndị otu, ana m akwado n'ihu ọha n'eziokwu na m na-ahọrọ AfD, n'ihi na ọ na-eguzo ma na-eme na ndabere nke Iwu Iwu. Ma ọ bụghị ya, agaghị m ahọrọ ha ma gharakwa ịtọ ntọala a. AfD na-eme mkpesa megide usoro nke Office nke Nchedo Iwu na-eme ugbu a nwere ezi ihe kpatara ya. Otu esi enyocha ya nke ọma, gọọmentị etiti ga-ada mgbe afọ gachara. Ma nke ahụ dị mma!
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge ọnwa 3 Oge ọnwa 3
Nkewa na ịdị n'otu na Germany
Ndi ndị nkịtị? Ọ dị ka enweghị mmegide dị ike na amụma njehie a na-enweghị ike ịkọwapụta. Mana naanị ma ọ bụrụ na ị kwenyere, dịka ndị ọchịchị na ndị obere, na echiche niile a pụrụ ichetụ n'echiche ga-abụrịrị eziokwu na ndụ ha niile, ga-eche otu ahụ. E nwere mmepe nke nzuzo na ọha mmadụ nke dị mkpụmkpụ, mana ọ kachasị ogologo oge. Nnukwu mgbanwe chọrọ ogologo oge itolite.
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge ọnwa 3 Oge izu 3
Mụ nwanyị na egwuregwu ụmụ nwoke na ndị ọzọ
Ọ ga - abụ ihe nzuzu iche na ọ dabara na ndabara ụmụ nwanyị abanye na ngalaba nwoke - ọkachasị n'oge asọmpi European. Mba - ọ bụ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Anyị kwesịrị iji eziokwu ahụ bụ na ụmụ nwanyị bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị bụ ụmụ nwanyị. Ihe niile kwere omume na enweghị okike a kapịrị ọnụ. Ma okike nwere ike ime ihe niile dị ka ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ dị ka nke ọzọ.
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge ọnwa 3 Oge izu 4
GDR sadulu mpe mpe akwa GG ochichi onye kwuo uche ya
Ndi otu ndi otu ndi otu Merkel amaghi onodu obula, odighi mmalite, ntoala ma obu nkpuru osisi choro ka echekwaa. Naanị ezi ebumnuche, ọchịchọ na nrọ na-egosi ụzọ maka ọdịnihu dị mma nke dabara na mmadụ niile na mba niile yana ihe okike na ihe ndị dị ndụ. Ọzọkwa, utopia na-eme mmemme mbilite n'ọnwụ ọhụụ ya site na mkpọmkpọ ebe na onye ọ bụla na-emegide ya na-agbanyeghị ụda na orcus.
Mgbanwe dị a areaa ka anyị na-ekwu maka ya?
Ihu igwe na Germany na-akawanye njọ. Ọ bụghị naanị ọnọdụ ihu igwe a na-akpọ nke mmadụ kpaliri mmasị na ọrụ dị ukwuu. Ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ezie kere ụmụ mmadụ. Ugboro ugboro Wrzburg chetaara anyị ọzọ banyere ọnọdụ ihu igwe nke mba ahụ.
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge ọnwa 4 Oge ọnwa 3
Nessgba aghara na nkịtị: 10-0
Ọ bụ ihe niile gbasara ijiri bọlbụ dịka ngwa ọgụ dị egwu maka ụwa na-atụghị anya ọha mmadụ na-enweghị oke ike, mana na ịnya ụgbọ eletriki na nwoke na nwanyị - na ngosipụta ihu igwe na ọnụ ọgụgụ dị nta na etiti "juputara na nri".
nke Alexander Brandenburg, tupu Oge ọnwa 4 Oge izu 4
Mara: Nsụgharị peeji a na-akpaghị aka ma nwee ike ibute obere mmejọ na mkpụrụedemede ma ọ bụ n'okwu njikọ.
ochichi onye kwuo uche
Cartel nke mbibi
Andmụaka na ezinụlọ
nke a na nke ahụ
© nwebisiinka 2019 | Germany na Titanic N'ezie